Energy Sistem weputara uzo ohuru nke ngwa ahia ihe egwu | Akụkọ akụrụngwa
Energy Sistem weputara uzo ohuru nke ihe eji egwu egwu
Eder Esteban | | Ndị na-ekwu okwu, Foto na ụda
Sistem ike bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị dị na IFA 2019. Na ihe omume a hapuru anyi otutu akwukwo ohuru, dika ndi ozo ndi ozo mere. The ụlọ ọrụ na-ewetara a ọhụrụ akara nke ngwaahịa maka egwu egwuregwu audio. N'ụzọ dị otú a, ha na-eji ekweisi ọhụrụ na ndị ọkà okwu emere maka ya abanye mpaghara ahịa a.
Ha abụghị naanị akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke ika ahụ, mana nke mbụ anyị na-elekwasị anya na ụdị egwuregwu ọhụụ a nke mere ka anyị nọrọ na nguzo ha na IFA 2019 n'isi obodo German. Ngwaahịa ụfọdụ na-egosi ọganihu nke Energy Sistem n'ahịa.
1 Isi okwu Egwuregwu Energy Sistem Egwuregwu ESG 5 Shock na Gaming ESG 2 Laser
2 Egwuregwu Earphones nke ESG1, soro egwuregwu vidiyo gị ebe ọ bụla
3 Onye na-ekwu okwu egwuregwu egwuregwu ESG 5 Thunder na onye isi okwu egwuregwu bụ ESG 3 Immersive, maka ahụmịhe egwuregwu zuru oke
Isi okwu Egwuregwu Energy Sistem Egwuregwu ESG 5 Shock na Gaming ESG 2 Laser
Igweisi Ịgba Cha Cha Ekweisi ESG 5 Shock na ESG 2 Laser, bụ usoro ọhụrụ Energy Sistem abụọ emere maka iji rụọ ọrụ ogologo oge egwuregwu. Ha ahọrọla ihe nlereanya circumaural na ụdị pad abụọ dị iche iche. ESG 5 Shock na-eji ikuku ntị iku ume na ESG 2 Laser gụnyere akwa akpụkpọ anụ ejirila akpụkpọ anụ.
Ndị ọkwọ ụgbọala nke ekweisi ọhụrụ ndị a jiri akara nke 50 (ESG 5 Shock) na 40 mm (ESG 2 Laser). Na mgbakwunye na ijikọta ọrụ vibration na ọkụ, ha nwere ọmarịcha nzaghachi ugboro ugboro yana usoro ụda agbanwere nke na-enye ike na doo anya na ma mkparịta ụka na mmetụta na ụda olu. Na mgbakwunye, ha abụọ jikọtara Boom Mic, igwe okwu nke na-enye ohere idozi ọnọdụ dị iche iche. Emepụtara igwe okwu a ka e wee jide olu onye ọrụ n'ụzọ dị mfe, rute na-enweghị mkpọtụ ikuku na nghọta doro anya na ntị nke ndị otu gị.
Dị ka Energy Sistem kwadoro na ngosi ahụ, ụdị abụọ ahụ kwekọrọ PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One na smartphones.
Egwuregwu ntị ntị ESG1, soro vidiyo vidiyo gị gaa ebe ọ bụla
Egwuregwu ntị ntị ESG1 bụ ekwe ntị maka ndị egwuregwu chọọ obere obere na ibu ibu ma na ụda dị mma. A haziri ha site na iji teknụzụ Dual Driver, nke jikọtara ndị ọkwọ ụgbọala anọ, abụọ na ọwa ọhụụ ọ bụla, iji nye ogo dị mma kachasị mma na ọnụọgụ sara mbara. Na mgbakwunye, ha nwere igwe okwu abụọ: otu agbakwunyere na ebe ọzọ Boom Mic. Ha dakọtara na PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One na smartphones.
Ịgba Cha Cha Ọkà okwu ESG 5 Thunder na Onye Ọgba Egwuregwu Egwuregwu ESG 3 Immersive, maka ahụmịhe egwuregwu zuru ezu
Onye na-ekwu okwu egwuregwu egwuregwu ESG 5 Thunder bụ ụda ụda 2.1 nke na-egosipụta satịlaịtị stereo abụọ dị ike na wuruwuru subwoofer nke na-enye ike 100 W kacha elu (50 W RMS) Onye na-ekwu okwu egwuregwu egwuregwu bụ ESG 3 Immersive bụ sistemụ 2.0 na-enye ike kacha elu nke 60 W (30 W RMS). Modelsdị abụọ ahụ dakọtara na PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One na smartphones.
Onye na-ekwu okwu na-etinye ntinye anya dijitalụ anya, ya mere ọ nwere ndakọrịta zuru oke na njikwa egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nwere atụmatụ a, dị ka PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One na smartphones. Ngwaọrụ abụọ nwere ọkụ ihu na ọkụ azụ dị ike nke a na-eme atụmatụ kpọmkwem na mgbidi. Rdị ọkụ ọkụ RGB LED ya bụ nnukwu uru ya ọzọ, ebe ọ bụ na ha na-eji agba dị iche iche emeziwanye ikuku na imikpu n'ime egwuregwu ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Energy Sistem weputara uzo ohuru nke ihe eji egwu egwu
Energy Sistem na-enye usoro okwu ya ohuru
LG na-ewebata ndị nlele ọhụrụ 3 maka ndị hụrụ egwuregwu vidiyo